Grape AZOS Nadezhda: famaritana isan-karazany, sary, toetra sy tarehy, aretina ary fanodinkodinana bibikely - Zaridaina - 2019
Hope Azos tena tsara: famaritana ny karazany, ny toetrany ary ny sary
Grapes - ny tsirony, ny menaka ary ny voaloboka mahavokatra - ny olona dia efa nankasitraka hatramin'ny fahiny. Nosoratana tamin'ny angano, angano, ary eny amin'ny andininy mihitsy aza izy.
Ny tsiambaratelon'ny fambolena, ny fikarakarana karazam-boankazo faran'izay tsara, ary koa ny fanodinana sy ny fitehirizana ireo voankazo, nandritra ny taonjato maro dia nidina hatramin'ny taranaka fara mandimby.
Rehefa nandeha ny fotoana, dia nianatra namokatra karazana voaloboka vaovao ny mpamboly, fa tsy ny toe-pahasalaman'ny faritra atsimo, faritra henjana henjana. Ary ny momba ny iray amin'ireto hybrides androany ireto dia hodinihina.
Karazana varimbazaha tranainy Nadezhda Azos
Famaranana tantaram-pirazanana sy fizaran-tany
Aretina sy bibikely
Karazana manao ahoana?
Ny voalobok'i Nadezhda Azos dia malaza amin'ny mpamboly rosianina noho ny toetra mampiavaka azy ireo, mamela azy ireo hamokatra be dia be tavoahangy mamy mahafinaritrana eo aza izany toetrandro maheryizay tsy maintsy mitombo.
Ity voaloboka ity dia manondro ny karazana loko manga (mainty) manga.
INFORMATION REFERENCE: Ny voaloboka voaloboka dia tsara ho an'ny fanjifana amin'ny endrika vita. (Tsy mitaky fanodinana fanampiny) Ary koa, manana fofona mahafinaritra, mahavariana sy manintona, ny bebitra sy ny cluster amin'ny ankapobeny.
Ny karazana latabatra ihany koa dia Karmakod, Bull's Eye and Dawn Nesvetaya.
Sariaka mahafinaritra sy mamy.
Endrey ny felam-boninkazo sy ny clusters.
Ny vokatra azo dia manome vokatra lehibe.
Ny berries dia mandefitra ny fitaterana.
Fiarovana mafy orana.
Fiarovana tsara ho an'ny aretina.
Tsy simba tanteraka amin'ny hadps.
Mety misy olana amin'ny fandotoana raha mitranga ny toetrandro ratsy mandritra ny vanim-potoanan'ny voninkazo.
Mety hitera-pahavoan'ny voankazo ny oram-be.
Noho ny halafon'ny fanamafisana ny vokatra, ny kirihitra dia mety hijaly noho ny fitrandrahana (mety hihintsana ny voaloboka na ny kalitaon'ny voankazo dia hijaly).
Tendrombohitra kely maniry amin'ny voany (tsy dia fahita firy).
Ny clusters dia manana endrika mifangaro, fa amin'ny fotoana iray ihany koa ny rafitra tsy misy na sampana. Ny lanjany mahazatra dia 500-900 gram. Be menaka borosy lava. Ny isan'ny cluster amin'ny iray dia mihazakazaka 1.2-1.6.
Ny taolam-paty dia manana tendrony lavalava ary misy hoditra mainty matevina sy matevina ary rakotra ranomandry. Mandritra izany fotoana izany, ny lanjan'ny berry dia 5-8 g (volon'ny 28x22 mm), izay ahafahana mametraka ny voankazo lehibe.
Ny tsiron-tsakafo mahafinaritra dia misy tsiranoka miavaka, izay 7-8 g / l, ary ny votoatin'ny siramamy, ny lanjany ho an'io karazany io dia voafaritra 15-17%. Ny plastika dia manana tavy feno fotsy.
Ny taolana dia manana lanjany ho an'ny sela (hatramin'ny 40 mg)
ZAVA-DEHIBE: Nadezhda Azos - vary varimbazaha maitso (nandritra ny 116-130 andro). Ny voankazo voarakitra dia efa hita amin'ny faharoa na fiandohan'ny taona fahatelo am-piandohan'ny volana Aogositra ary afaka mihazona ao anaty kirihitra mandra-pahatongan'ny voalavo voalohany ary tsy manova ny fepetra tsiro.
Strasensky, Ataman Pavlyuk ary Asya koa dia anisan'ny mpihazakazaka an-tsitrapo.
Ny voaloboka dia mihamitombo haingana be amin'ny fahanterana (2 / 3-6 / 7 amin'ny totalin'ny halavany). Ny bushes dia mivoatra mafy amin'ny voninkazo bisexual. Ny ravina dia mavomavo, lehibe miaraka amin'ny fahatsapana haingon-tsiramamy amin'ny tendron'ny tifitra tanora. Manana bladsy 5 izy ireo miaraka amin'ny endrika misokatra amin'ny fivalanana.
Avy eo, jereo ny sarin'i Nadezhda Azos:
Io karazana voaloboka io dia azo avy amin'ny toeram-ponenana experimental Anapa zonal amin'ny fambolena sy fiompiana (AZOSViV efa voafaritra) tamin'ny fijerena ny karazana Moldavia sy ny Kardinaly nanomboka tamin'ny 1963 ka hatramin'ny 1965.
INFORMATION REFERENCE: Amin'izao fotoana izao dia nanova ny anarany ny fitobiana ary ankehitriny dia misy ny Ivon-toeran'ny Federaly ao amin'ny Anapa Zonal momba ny fambolena sy fiompiana an-tsokosoko avy ao amin'ny Kaokazy Avaratra Caucasus Zonal Scientific Research amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fambolena (FABNU Anapa ZOSViV SKZNIISIV).
Ny mpanoratra ny hybride interspecific, fantatra amin'ny anarana hoe Nadezhda Azos, dia N.N. Alpakova, izay niasa tao amin'ny gara nandritra ny 30 taona mahery.
Ny grape Nadezhda Azos dia noforonina manokana ho an'ny latabatra Rosiana, samy hafa ny tsy maharitra ary ny ankamaroan'ny taona sy ny hatsiaka. Noho izany dia nitondra voaloboka feno fanoherana mahery vaika ny mpamboly, afaka nahatakatra hatramin'ny -22-26 degre Celsius.
ZAVA-DEHIBE: Rehefa ambany ny toetr'andro ratsy dia ilaina ny manarona ny voaloboka!
Ny varimbazaha maitso matevina dia Super Extra, ny hatsaran-tarehy avy any amin'ny avaratra sy ny Pink Flamingo.
Ny tsy fahampian-tsakafon'io karazan-tsakafo io dia miaritra ny hain-tany, tsy mila rano fanampiny, ary mitombo tsara amin'ny fasika sandry sy tanimanga, ary manome vokatra be dia be. Ny fahavokarana amin'ny tifitra dia 75-90%. Ankoatra izany, afaka mitazona ny tifitra lehibe sy ny zana-borona izy ireo. Any amin'ny faritra samihafa, ny sakafon'ity grapes ity dia mirefy 160 santimetatra ka hatramin'ny 5-8 taonina isan-taona. Ao amin'ny dacha miaraka amin'ny fikarakarana tsara dia afaka manome lanja 30 kg.
ZAVA-DEHIBE: Rehefa mamboly kirihitra goavam-be ao amin'ny dacha ianao, mba hisorohana ny fahavoazana amin'ilay orinasa amin'ny lanjany na ny rivotra mahery, dia tokony hampiasainao ny fingotra. Tsara kokoa ny misafidy ny endriky ny kofehy na ny tendrony.
Ny Hope Azos dia ekena ho toy ny karazana varotra tsy miovaova sy tsy misy dikany. Mandefitra ny fitateram-bahoaka izy ary tsy manary ny endriny ary ekena ho anisan'ny karazana varotra tsara indrindra.
Fankalazana tanteraka, Giovanni sy Denisovsky.
Ny fampielezana ny voaloboka dia azo atao amin'ny fomba efatra:
Amin'ny fampidirana voaloboka (ity dia antsoina koa hoe "fampielezana amin'ny tsipika")
Famaranana ireo zana-kase efa voaomana (nividy na mitombo tsy miankina)
Ity hybride ity dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fiarovana amin'ny tsy fahampian'ny aretina voajanahary mahazatra indrindra:
Volo fotsy hoditra (araka ny fanoheran'ny mpanoratra - 2).
Mildew (araka ny loharanom-baovao, faharetana - 4).
Oidium (araka ny loharanom-baovao, ny fanoherana - 4).
Raha ny aretina toy ny anthracnose, chlorosis, kanseran'ny bakteria na ribela, dia mendrika ny handray fepetra manokana amin'ny fisorohana.
Misaotra ny hoditry ny vovoka izy ireo, saika tsy manisy ratsy azy. Na izany aza, tokony ho voaro amin'ny vorona ny voankazo. Ny iray amin'ireo fomba mahazatra indrindra dia ny mametraka ny baka amin'ny kitapo vita amin'ny lamba manokana, izay hiaro ny voa avy amin'ny bibikely.
Ny famintinana dia tiako ny milaza fa i Nadezhda Azos dia safidy tsara ho an'ireo izay manao ny fanandramana voalohany haniry voaloboka. A unpretentiousness Hoavy sy voninkazo mahafinaritra dia hahagaga na dia mpanao za-draharaha za-draharaha aza.
Ry mpitsidika malala! Alefaso ny fanehoan-kevitra momba ny karazam-boalaza "Hope Azos" ao amin'ireo fanehoan-kevitra eto ambany.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Hope Azos tena tsara: famaritana ny karazany, ny toetrany ary ny sary